Mandady ny trambo! | mandimby maharo
Mandady ny trambo!
Posted on 13 March 2012 by Mandimby Maharo
Nahavariana ny nahita ny disadisa niseho teo amin’ireo mpianatry ny oniversite teny amin’ny ministeran’ny fampianarana ambony ny 09 martsa teo. efa ny alarobia 07 marsta moa ireto mpianatra, avy any amin’ny école polytechnique vontovorona no tonga teo ary nanangana lasy teo mihintsy mba hitaky ny fameranana ny fampianarana. Efa ho amam-bolana maro tokoa manko izao no niato ny fampianarana eny amin’ireo oniversitem-panjakana eto Antananarivo noho ny fitokonana ataon’ireo mpampianatra mpikaroka. Dia nanantona ny minisitra ireto mpianatra saingy tsy afa-po ka dia izao nikarakara fitokonana izao koa. Ny antony ankoatry ny famerenana ny fampianarana dia ny fangatahan’izy ireo ny hialan’ny minisitra 2, dia ny minisintry ny fampianarana ambony sy ny minisitry ny vola, izay toa mandrirarira azy ireo araka ny filazany. Nisy andiany telo izy no tonga teny : ao ireo mangataka ny hiverenan’ny fampianarana fotsiny ihany, ao ireo mangataka avy hatrany ny ialan’ny minisitra, ary avy eo dia tonga ireo tsy manaiky ny hanalana ny minisitra satria aminy dia efa tsy any amin’ny ministera intsony ny olana fa ireo mpampianatra no be famaritra. Rehefa samy teo an-tokotanin’ny ministera nefa izy ireo dia raikitra amin’izay ny fifamalina teo amin’ireo mpanohana ny minisitra sy ireo izay mitaky ny fialany. Nanomboka niakatra ny feo ary samy nanezaka nifandresy lahatra. Nisy ireo izay nanao vava ratsy ka tsy tantin’ny sasany ary dia nifamely totohondry no niafarany. Nisy noho izany ny naratra sy ny rovitra akanjo. Soa ihany fa voafehy ireo tsy nahatsindry fo ireo ka nilamina haingana ny raharaha
Efa maro izay resaka natao momba ny fampianarana ambony sy ny fitokonana izay. Ny tiana ho ambara eto dia ny fitaran’ity resaka ity hatrany amin’ireo mpianatra isam’bondrona pedagôjika. Mahonena ary mahalasa saina ihany iny zava-niseho iny satria izao tokoa ilay hoe ny lehibe no mifamaly ka ny ankizy no voaporitra. Raharahan’ireo samy mananm-pahefana any ambony any, dia ireo minisitra 2 sy ny sendikan’ny mpampianatra dia niteraka fandratrana olona toy izao. Mahonena satria lasa nanimba ilay firaisankinan’ny mpianatra dia ny fangatahana, azo lazaina mihintsy ary moa fa fitalahoanan’izy ireo mba hianatra ity raharaha ity. Taratra tamin’iny herisetra iny ny fahaverezan-kasin’ny onivesite eto. Eo koa ny fahasimban’ny maha olom-banona ny mpinatra ambony. Nahagaga tokoa raha mpianatra mandia sekoly ambony no lasa tsy nahay nifandamina intsony sy nifandesy lahatra ampilaminana fa totohondry no miresaka. Raha ny zava-nisy koa dia nisy ny fanaramana olona hafa avy any ivelan’ny mpianatra mba hanakorontana. Izay naniraka aloha tsy hay fa raha ny fitarainan’ireo mpianatra dia ny handravana ny hetsika ataony sy fanosoram-potaka azy ireo no antondian’ireo olona ireo.
Ohatra iray monja io hitarafana ny disadisa sy lonilony izay efa manomboka mahazo vahana ary efa manomboka miha mahery setra eto amitsika. Disadisa izay mety hitarika fisarahambazana amin’ny samy malagasy, amin’ny samy mpiray sekoly…
One thought on “Mandady ny trambo!”
Pingback: Fihavanana Malagasy: “Ombay mitady” « mandimby maharo